Wariye ka tirsanaa Idaacadda Shebeelle oo caawa lagu dilay Muqdisho – Radio Muqdisho
Wariye ka tirsanaa Idaacadda Shebeelle oo caawa lagu dilay Muqdisho
Allaha u naxariiste C/casiis Maxamed Cali Xaaji oo ka tirsanaa wariyayaasha ka howlgala Idaacadda Shabeelle ayaa kooxo hubeysan caawa ku dileen degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir, iyadoo wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Maxamed Cabdi Xayir “Maareeye” uu ka tacsiyeeyay geerida Marxuumka.
Kooxo hubeysan oo watay Mooto Bajaaj ayaa la sheegay in ay wariyaha ku toogteen meel u dhow gurigiisa oo ku yaala degmada Yaaqshiid.
Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir “Maareeye” ayaa si kulul u cambaareeyay dilka Wariyahaasi, isagoo sheegay in lagu raad joogo gacan ku dhiiglayaashi dilay Marxuumkaasi, wuxuuna tilmaamay in sharciga la horkeeni doono.
Sidoo kale wasiirka ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray eheladi, qaraabadi iyo asxaabti uu ka geeriyooday Allaha u naxariistee C/casiis Maxamed Cali Xaaji oo ay dishay gacan ka gardaran.
Daawo:Tababar ku saabsan sida looga faaiideysan karo nalalka ku shaqeeya cadceeda oo Muqdisho lagu soo gaba gabeeyey
Jeneraal Saxardiid “Ciidanka ayaa biyo u dhaaminaya dadka ku nool deegaanka C/lle Biroole”
Jeneraal Saxardiid "Ciidanka ayaa biyo u dhaaminaya dadka ku nool deegaanka C/lle Biroole"